Ngbanwe na acho oru | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Rubric: Gbanwee ma chọọ ọrụ
Otu esi achọta ọrụ na edere na ụlọ
Otu esi achọta ọrụ na edere site n'inye ụlọ N'ebe ugwu, a chọrọ ndị ọkachamara n'ebe niile. Enweghi ndi okachamara n'ebe ahu. Ya mere ị ga-ahụ ọrụ na ụlọ dị n'ebe ugwu na-enweghị nsogbu ọ bụla. Kedu ihe ...
Ị ga-aga Moscow ka ị na-ekiri. onye gara? kedu nyocha?
Ị ga-aga Moscow ka ị na-ekiri. onye gara? kedu nyocha? maka ụmụ nwanyị ohere kachasị mma. Ana m ebi na Republic of Belarus. Ụgwọ ụgwọ adịghịkwa elu. Bido ịchọta ihe ọhụrụ. A na-akpọ ya na Moscow ...
kedu ihe ọ bụ njikwa
kedu ihe ọ na-ejikwa Ee? O yiri ka ọ zara azịza ya n'onwe ya: Onye njikwa ITNXX IT bụ onye isi nke ngalaba IT (Information Technology Information Technologies), ọrụ ya bụ ijikwa ngalaba a. Ngalaba IT na-eme ihe niile ...
Kedu ihe onye ahịa na-ere ahịa mere?
Kedụ ihe onye na-ere ahịa na-eme ?? Onye na-anọchite anya ahịa na-enye ngwongwo ụlọ ọrụ ya (nke ọ na-arụrụ ọrụ) ịchọta ndị na-azụ ma ọ bụ ụlọ ahịa nke a ga-ere ahia. Rygwọ ụgwọ ọnwa na-abụkarị pasent nke azụmahịa ... ọrụ na-enweghị isi ...
Ule maka ọrụ na post ụlọ ọrụ
Nnwale maka ọrụ na post ọfịs Nnwale nwere ike ịbụ na mpempe akwụkwọ (nnwale uche, agụmakwụkwọ), na "na omume" - nnwale nke nkà kọmputa na ihe ọmụma ...
kedu ihe onye ahịa ahụ na-eme?
kedu ihe onye ahịa ahụ na-eme? Ọ dabeere na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ na ụlọ ọrụ, ọ dịghị, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịzụta ngwá ọrụ nke ụmụ agbọghọ anaghị aghọta. N'ikpeazụ, ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa ahụ ...
esi dee edemede maka onye ahịa ahia
esi dee nkọwa maka onye na-ere ákwà ngalaba Chamomile F. I. O. Ltd. anọwo na-arụ ọrụ ebe ọ bụ _________ na ọnọdụ ____________. N'oge ya na ụlọ ọrụ, ọ kwadoro onwe ya dịka onye isi, ịdọ aka ná ntị, idozi na ...
onye ị ga-aga ịmụta, nke mere na otu narị percent nwere ike inweta ọrụ, m bụ 40 afọ. Nwoke
onye ị ga-aga ịmụta, nke mere na otu narị percent nwere ike inweta ọrụ, m bụ 40 afọ. Nwa Welder. 100% nafig nhọrọ ọmụmụ ihe. gaa na mgbasa ozi maka ọkachamara mkpuchi mkpuchi ...
Ònye ga - arụ ọrụ na ihe ọmụma akụ na ụba n'ime
Kedu onye nwere ike ịrụ ọrụ na nkọwa agụmakwụkwọ akụ na ụba n'ime Janitor, nwanyị na-ehicha ụlọ, onye na-ere ụlọ ahịa, onye na-ere ahịa ... wdg. You chọrọ ọpụrụiche? Chọọ ya! Gụpụta ọkwa, denye aha na mgbanwe ọrụ, na ntanetị, rịọ maka enyemaka si ...
mgbe ọmụmụ ha na-enye Asambodo ma ọ bụ Asambodo, gịnị bụ ọdịiche, na ihe ka mma?
mgbe agụmakwụkwọ ahụ nyere Asambodo ma ọ bụ Asambodo, olee ihe dị iche, olee nke ka mma? Akwụkwọ DAT Asambodo maka itinye aka na mmemme ọ bụla. Akwụkwọ Asambodo - na-egosi ọkwa nzere, ihe ọmụma ụfọdụ. (Echere m otú ahụ). ...
Na-arụ ọrụ ebe ị na-adịghị mkpa ka gị na ndị mmadụ kwurịta okwu.
Na-arụ ọrụ ebe ị na-adịghị mkpa ka gị na ndị mmadụ kwurịta okwu. Ha ga-ewega ọrụ ahụ na ụlọ ngosi ihe ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla, were ya n'enweghị agụmakwụkwọ na ahụmahụ, dabere na ndị ha bụ. Ee, na ahụmahụ na mahadum gị ...
kedu ihe ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọrụ na-eme
Kedu ihe ụlọ ọrụ na - ahụ maka ndụmọdụ na - eme? Nyocha bụ ọrụ azụmahịa zuru oke. Ọ gaghị ekwe omume ịmata ọdịiche dị iche iche ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nchọpụta na-eme; Ma e nwere dị iche iche ...
Kedu ndị bụ ndị ọbịa? Kedu ọrụ a?
Kedu ndị bụ ndị ọbịa? Kedu ọrụ a? Ndewo Anyị na-akpọta ụmụ agbọghọ iji rụọ ọrụ na South Korea (ọrụ nnabata). Nkwenye nchedo. Nkwekọrịta site na ọnwa 2 Draft and accommodation for ...
kedu ihe onye nlele ahụ na-eme
kedu ihe onye njikwa ahụ na-eme n'ịchịkwa ọrụ nkịtị. Anyị anaghị agwụ ike ma ọlị)) ... Agaghị m ekwu ihe ọ bụla dị mma, mana ịkwụ ụgwọ obere apụtaghị na anyị ka nwere ike ịbelata nkwụsị nke ego, ...
Kedu ọrụ a na-enye? Kedu ihe ọ bụ?
Gịnị bụ inye ọrụ? gịnị ka ọ bụ maka ya? Ọrụ Job bụ akwụkwọ gọọmentị na-egosi nkwenye nkwenye nke ndị ọzọ - onye ntuli aka na onye were ya n'ọrụ. Ọ na-achịkwa mmekọrịta gị n'oge oge ịbanye na ...
Ọ dị onye ọ bụla gbalịrị ịrụ ọrụ n'ụlọ? dịka ọmụmaatụ envelopes glu na t, d, n'ihi na a na-akwụ ya ma ọ bụ
Ọ dị onye ọ bụla gbalịrị ịrụ ọrụ n'ụlọ? dịka ọmụmaatụ, envelopes gluu, na t, d, n'ihi na ọ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na a gaghị ekpocha ihe a niile. A ga-ere akwụkwọ ndị a n'onwe gị, nke a ga-abụ nke gị ...
Biko nye otu ụdị nke àgwà nke ọrụ. Ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọhụụ ọhụrụ. Daalụ n'ọdịnihu.
Biko nye otu ụdị nke àgwà nke ọrụ. Ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọhụụ ọhụrụ. Daalụ n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ Chamomile F. I. Ọ nọ na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na _________ nọ n'ọnọdụ nke odeakwụkwọ odeakwụkwọ. Mgbe na-arụ ọrụ na ...
Nche nche nche
Na-arụ ọrụ na nlele anya. Onye ọ bụla nke na-atụ anya inweta ọrụ na nche, m ga-enyere aka ka m nwere ike, ya onwe ya na-arụ ọrụ maka 11 ruo ọtụtụ afọ, enwere ọtụtụ ndị enyi na-arụ ọrụ, ọtụtụ igwe na adreesị email nke ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ. [Email na-echebe]...
mgbe ị na-arụ ọrụ, gịnị ka “Ihe Ọmụma 1C” pụtara?
mgbe ị na-arụ ọrụ, gịnị ka “Ihe Ọmụma 1C” pụtara? mmemme dị otú ahụ maka ndị na-aza ajụjụ. Usoro akaụntụ 1C bụ mmemme zuru ụwa ọnụ nke na-enye gị ohere ịme ụdị nchịkọta ego niile. Akụkọ ihe mere eme nke mmepe ya dị ogologo ma ...
Kedu ihe dị iche n'etiti ọrụ n'okpuru nkwekọrịta ọrụ na ọrụ n'okpuru ndekọ ọrụ?
Kedu ihe dị iche n'etiti ọrụ n'okpuru nkwekọrịta ọrụ na ọrụ n'okpuru ndekọ ọrụ? Ulo oru nkwekorita 56466 bu ihe di mkpa na ihe edere edere n'akwukwo akwukwo, n'uzo a ihe obula, ma iwu iwu iwu obodo ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 5,166.